Aiza no tianao haleha mandeha amin'ny lohataona ity? - Jomo Technology Co., Ltd
Spring avy tsy ho ela, no tianao handeha amin'ny dia lavitra na oviana na oviana? Na te-hivoaka ka hijery tontolo hafa? Ve ianao te-hanome ny tenanao na ny fianakaviana iray mahatalanjona sy ny fialan-tsasatra tonga lafatra?
Raha ny valiny dia Eny, azafady hifidy mahitsy amin'ny andro mba hivoaka, dia tsy nampoizina kosa no ho azonao toerana manodidina amin'ny faran'ny dianareo.
Na dia izany aza, misy fanontaniana, izay karazana fitaterana no kokoa ny mifidy, na hampiofanana fiaramanidina? Na inona na inona mifidy, rehefa tonga toerana any amin'ny faran'ny lasan-davitra, dia mila tsara lavitra fohy-fitaterana. Fa izay fohy-lavitra Travel fitaovana no tsara indrindra?
Amin'izao fotoana izao, ny Skateboards herinaratra tena malaza ny ankamaroan'ny tovovavy sy tovolahy. Tsy niraharaha ihany fitaovana tsara fa tena afaka ny olona manintona ny maso. China Koowheel 2 taranaka herinaratra longboard (Dual brushless Hub-Motors) replaceable bateria manana entana, 2pcs Packs bateria dia afaka haharitra 60km, mandehana intsony. Ny ara-dalàna ny hafainganam-pandeha dia 30km / h, ao an-tampon'i hafainganam-pandeha 42km / h, mandehana haingana kokoa. (miankina amin'ny lanjan'ny vatana sy ny toe-dalana) Ankoatra izany, izany dia herinaratra skateboard nekena ho an'ny Air Tsidika, tsy mila miahiahy momba ny kilasimandry olana mihitsy.
Raha toa ianao ka lamaody ankizivavy na ankizilahy, mitondra ny herinaratra skateboard no safidy tsara indrindra. Afaka manomboka hijery izao tontolo izao na oviana na oviana, ary mankafy ny toerana manodidina tsara tarehy teny an-dalana. Maniry ianao manana hafa mahafinaritra sy diany eto amin'ity lohataona.
Post fotoana: Feb-28-2018